Igama elithi "uhlamvu" livela ngesiGreki. Uma lokho kwakusho ukuba abuqede ekumeni isigxivizo zababusi zemali. incazelo yalo original kwakuhambisana nezinga izimfanelo ubuholi, okuyinto ngokungangabazeki waba nkosi: ukwethembeka, ubuqotho, isibindi, ukuzinikela, uthando nokuzinikela emsebenzini.
Namuhla, leli gama libhekisela iqoqo nobuntu umuntu. Ngokusho odokotela bengqondo, ikakhulukazi incike Ubumnene namakhono.
Sibekwa ubunjalo ukhula, bese kwakhiwa a lifetime is ... Ngakho uma kuba ukuthi bayakwazi ukuthonya ke, ngaphandle kokuzama ukuchaza ezinye izinto ezivelile kobuthakathaka babo siqu, neminjunju nokuthambekela okungokwemvelo? Kuthiwani imfundo? Ingabe abazali nomthelela uhlamvu wenzalo? Lezi nezinye izinkinga ezihlobene, i-athikili yethu uzokuphendula. Kusukela ke uzofunda indlela lungadambisa umlingisi, ukwakha Yilezo zimfanelo awukwazi kuphela ukuqeda ukwesaba, ngamaphutha nobuthakathaka, kodwa futhi ukuba ngcono ikusasa.
Obani ababizwa ngokuthi spineless?
Lo magazini kudinga igunya ukucatshangelwa. Umuntu ngohlamvu ababuthakathaka kulula ukunqotshwa isilingo, it is eholwa amaza nenzondo, nokwesaba amaningi bayakwazi uwulethe ukucindezeleka futhi ukuntengantenga ngokomzwelo.
Yobuthakathaka abanakukwazi ukuvikela umbono wabo, ba kulula ukuphatha. Umuntu onjalo akunakwenzeka ukuba abe umholi, kodwa ngisho lokhu ukuthi lucky, bayakulenzelwa kwaphoqa emhlabeni by abangaphansi kwakhe dabukisa abakuthandayo.
Uma uqaphela ingane ekhulayo noma izici eyethile ezithandayo, ungalilahli ithemba. Believe me, ukusebenza kuma-ukulungiswa nemfundo njalo kuyazuzisa. Kusadingeka ithuba lungadambisa uhlamvu oqinile.
Yini uwuhlobo lomuntu?
Kukhona izimfanelo eziningana eziyisisekelo ezenza umuntu ukulawula imizwelo engokwemvelo, neminjunju, ukuze simelane nezilingo seductions.
Sizohlola ngokuningiliziwe futhi uzokwazi ukusiza ukuthola izimpendulo umbuzo indlela lungadambisa uhlamvu. Uzothola elamukelekile, uma ukusebenza ukuthuthukiswa ngayinye kulezi zimfanelo.
Yilwa amaza futhi izinkanuko
Aristotle wabhala mayelana amabutho emikhulu eyisikhombisa axazulule ngaphakathi kumuntu. Ubiza kubo kanje:
Yiqiniso, thina ukuzizwa mizwelo kaningi ngosuku, kodwa asikwazi ubavumele ukulawula izenzo zethu namandla nethonya izinqumo. Kungenjalo, uyomane yizigqila, bona akuqede, udle ifa lazo zonke imicabango yakhe. Umuntu onalo uhlamvu ebona, akuqhubeki mayelana izinkanuko, yilifa ababuthakathaka.
Ungavumeli ukuthonya kwakho lutho kodwa ingqondo. Yiqiniso, wonke umuntu ophilayo echayeke ipheshulwa, ikakhulukazi ezimweni ezinzima. Kodwa into eyodwa - ukukhombisa imizwa (lokhu nje isiqhwaga futhi akesabi), kuhlukile - sokunikela amandla abo.
Kanjani ukuba simelane amaza engenangqondo? Qeqesha ikhono sibheke nizithibe ngasiphi isimo. Ngaphambi kokunquma ukuthi ngobuqotho zibuze bese uphendula ngobuqotho, ukuthi iphoqa ukuba ngikhethe: izizathu inhloso noma amaza zikhathazeke inhliziyo?
Ngezinye izikhathi ukuphila ngokwako ulaka uhlamvu. Esimweni kunzima ngokuvamile izimfanelo manifest kobuntu yena wayengazi. Nokho, lokhu akusho ukuthi kufanele kuzame yedwa aphonse ukwephulwa ukujabulisa lowo omthandayo, lowo umngane noma isitha. Ukudalwa yokufakelwa lesi simo esinzima, kamuva kufanele heroically unqobe, ngokuvamile efana ngaphezulu posturing kunokuba eqeda nemvelo.
Ungazami ususenkingeni, ngisho uma uqinisekile ukuthi kuyoba wokunqoba. Ekuphileni futhi ngaphandle inselele ngokwanele. Qalaza - futhi mhlawumbe bazobona umuntu udinga ihlombe eqinile.
Winner of imvelo omnene njalo efuna iqiniso, futhi iyimbangela eyinhloko essence. Ikakhulukazi uma isimo kuziwa abantu abambalwa. Cishe usuke wezwa izwi wonke umuntu iqiniso zabo, futhi iqiniso kuphela uhlukile. Yizwa version ngayinye amaqembu. Ungalingeki, engaqondi, nime ohlangothini abantu obathandayo futhi amnandi. Yebo, ngezinye izikhathi akulula, kodwa angisho lutho, ukuthi nobunzima omnene uhlamvu. Okuwukuphela kwendlela ihlale ecaleni ezinhle. Ukuvikela okungalungile, wenza kuye senze.
Isixazululo iyiphi inkinga zingatholakala, ukugwema ukucwiliswa in izinxushunxushu emizweni, ubandlululo, kube namahemuhemu, aveze nezinto azithandayo nangazithandi.
Ngitshele indlela lungadambisa umlingisi, ngokuba kulo ngenkolelo yokuthi lelo konke okwenzekayo kusengaphambili kusengaphambili? Futhi kungani uhlupho ukusebenza ngokwakho, uma ungakwazi ukubhala off lutho namaqhinga ukudalelwa?
Indoda ngohlamvu eqinile abazibheki ongenaso pessimist noma ukuba nombono omuhle ngezinto. Akenzi akhononde izimo, kodwa hhayi lutho kulo ngenkolelo yokuthi lelo zonke ngeke ngokwalo ukuthuthukisa kahle.
Ukukholelwa ezinhle kuyadingeka, kodwa kungenzeki ukuba anikele umqondo umthwalo konke okwenzekayo. Khumbula ukuthi konke ukuphila kwakho kuze kuwe: kwezimo ukuthi unjalo ngenxa yezenzo zakho (noma, Ngakolunye uhlangothi, yokungenzi).
Ukubonga ngalokho onakho
Ngokuvamile sizwa: "Awu, lapho asinawo," Ingabe uthi, umuntu onamandla kangaka nginenhliziyo? Kuphi ungakwazi wazi ukuthi kwenzekani kude endaweni ethile kude? Khona manjalo, kwaba kubantu imicabango efanayo?
Uma unquma ukuthatha indlela self-ngcono futhi ufuna ukufunda indlela lungadambisa umlingisi, funda Asikaze sitshele muntu hhayi umona. Khumbula ukuthi ubani obangele zonke izenzakalo ekuphileni kwakho? Konke kusezandleni zakho! Gxila kulokho okudingeka ukwenze ukuze aphumelele, kunokuba ukulangazelela izimpahla ayitholakali.
Omunye izimpawu eyinhloko ababuthakathaka nginenhliziyo umuntu - ukungakwazi okwenqaba. Uma uhlangabezana nobunzima ukuze bayeke izinto awukhathali, qinisekisa ukuthi ukuxhumana nabantu ezingemnandi, nalokhu futhi, kufanele ziqondiswe. Ningavumeli muntu ogibeni okuphambene nalokho impilo yakho wakhononda.
Odokotela bengqondo ukholelwa ukuthi lesi sikhathi kungaba kuphela zibonakale zingabalulekile. Eqinisweni, akulula kangako ukufunda ukunikeza. Ake yini uphatheke kabi ukuthi akuyona yonke into Kuyophumela ethubeni kwesokudla.
Ikhono zokukuvumela nje njengebalulekile. Uhambo, okwase kuyisikhathi eside ngiphupha. Cela, ekugcineni, ukwandisa nezibonelelo. Nquma ingxoxo sina nomunye umuntu.
Iyinkimbinkimbi? Kakhulu. Kepha ungaqala ne elula - bafunde thembeka kuwe ngokwakho. Khumbula, ngaphandle ingozi, awukwazi ukujabulela injabulo ukunqoba!
Yiba nesithakazelo ukwamukela imibono yabanye, kodwa musa ukuyikhulumela
Noma ubani uthi akanandaba umbono kothile, ikakhulukazi disingenuous. Ezweni lanamuhla elisebenzisa ubuchwepheshe akunakwenzeka ukuba zingaxhumani emphakathini. Kodwa umuntu ngohlamvu eqinile kufanele ukwazi, sihlukanise ukolweni emakhobeni.
Lapho senza izinqumo, kufanele ucabange ukuthi imiphumela kuyoba konke okwenzayo. Ingabe othile amazwi akho musa ubuhlungu? Ngeke kuthinte ukuthi izenzo isiphetho kothile?
Ekuhloleni lokhu, zama ukuba inhloso. Nqaba amaphupho nje ngenxa yokuthi othile kusuka bangaphandle kungenzeka uthanda ke, kungcono silly. ubandlululo kwabanye abantu akufanele kuphazamise kakhulu ukufeza inhloso. Yiqiniso, uma ukholelwa ukuthi wenza into elungile.
Iba nenhlonipho impendulo: musa ukuphoqelela intando yabo kwabanye.
Fundani ukwenza okuhle
Ngokuqinisekile wonke umzali ecabanga mayelana nendlela lungadambisa le uhlamvu ingane. Kulokhu, akukho indlela engcono ukwedlula isibonelo siqu. Amakhulu imiyalelo yakho futhi izintshumayelo ezihambayo kakhulu ngeze, uma indodana noma indodakazi, uyoba ahlazise ababuthakathaka futhi ubonise nandaba abahlukumezekile.
Kungase kubonakale sengathi ubuhle akuhlangene ngezikhwepha uhlamvu. Kodwa cabanga ngalokho amehlo ukubheka thina zingane lapho sisiza nokugcina!
Ingane ngubani ezikhuliswa umzali-advocate, umsizi umzali uyaqiniseka ukuthi kuhle - ke siwukubonakaliswa lokhu namandla.
Akubalulekile nje kuphela indlela lungadambisa umlingisi, kodwa nokuthi ukwenze kanjani ukulondoloza ngesikhathi esifanayo ngenhliziyo enhle. Ikhono ukujabulela ngokunqoba zabanye abantu, Okuxakayo ukwabelana ukwesaba yomunye, ukusekelwa zikhathi imithwalo - izimpawu ubuntu namandla ngempela. Ukuklinywa a ngomona oqhoshayo, ukuqeda lezi izinkanuko ezimbi esingokwemvelo weaklings kuphela!
Sebenza ukwesaba kwakho
Akumangalisi ukuthi akusiyo wesabe lutho - kungcono crazy, kodwa hhayi isibindi, kodwa ukwesaba, kodwa ukwenza - kungcono ngempela, isibindi sangempela. Ngokuphelele ukuqeda ukwesaba akunakwenzeka, ngoba ezenziwa imvelo ngokwayo. Fear - uhlobo indlela ukuzivikela, esiklanyelwe axoshe abantu ezimweni eziyingozi. Ngakho-ke, musa ufake umgomo ukuqeda ukwesaba, bafunda kangcono ukuhlala nabo.
I babenakho ukwesaba - kuba njalo inselele. izenzakalo ulaka uhlamvu azungeze ngamunye wethu. Musa sizigweme ngaphandle isidingo - bafunde ukuba banqobe isikhathi ngasinye nokulawula imizwa yabo. Ukunqoba ngakunye encane phezu yokwesaba kwakhe lukhuni uhlamvu uphe izizathu ngokuzidla.
Ukukhuluma mayelana nendlela lungadambisa umlingisi indoda eziningi kanye sikusho zokuvivinya umzimba njalo. Kodwa umdlalo kubaluleke abesifazane.
Lena inkinga sifaneleka ikakhulu kulabo ungathandi hang out at the bar noma lift izinsimbi. Cabanga ongakhetha, funa into kuyoba ngendlela esilindele yakho. Mhlawumbe inketho yakho - akusiyo ejimini futhi ukuqina, futhi Motocross noma ugibele?
Ezemidlalo kahle imimoya umzimba kanye nemvelo. Khumbula ukuthi amakilasi kufanele kube njalo, kodwa isizathu ukweqa umsebenzi angabhekwa ngaphandle uma isifo. umuntu nginenhliziyo nje abakwazi nge ncazelo kube umuntu oyivila kanye bumpkin.
Ungesabi amagama amahle
Ingabe lowo muntu onamandla ukuba uthi, "Ngiyaxolisa", "nginecala," "Mina eyayingalungile", "Kodwa ngangenza iphutha"? Ingabe lo lobuthakathaka kuwe akunjalo?
Khumbula: luhlata ngamabomu, rigidity, ubulukhuni - akuyona kuwuphawu lwamandla. Ngokuvamile kuba imaski ngemuva okuyinto efihla nobuthakathaka izakhiwo.
Izazi zokusebenza kwengqondo ezithi ukuthi elingaphandle lamagama kunzima kakhulu kunalezo ejection kokusakazwa ka esihlambeni nasezinsizini izinsolo. Ukuvuma amaphutha kuphela ngabantu amakhulu kunawo wonke endaweni umoya. Khuluma walithanda ngemizwa yabo, ungesabi sokuvuma phambi kwabo (phela thina asisibo ongenasono). Unganqikazi ke, musa skimp on ngokusuka enhliziyweni namazwi anomusa.